Xeerka Digital Millennium Copyright ("DMCA") | SActivator.com
Sactivator.com waa in waafaqsanaanta 17 U.S.C. § 512 iyo Xeerka Digital Millennium Copyright ("DMCA"). Waa siyaasadda in ay ka jawaabaan wixii ogeysiisyada jebinta iyo qaadaan tallaabo ku haboon sida waafaqsan Xeerka Digital Millennium Copyright ("DMCA") iyo sharciyada kale ee hantida aqooneed ee ay khuseyso.
Haddii wax aad koobigeyda ayaa posted on sactivator.com ama haddii links in ay wax aad koobigeyda loo celin xagga search engine iyo aad rabto in aad wax this saaro, waa in aad keentaa isgaarsiinta qoraal ah in details macluumaadka ku qoran qaybta soo socota. Fadlan la soco in aad masuul ka noqon doonaa magdhow (oo ay ku jiraan kharashka iyo lacagta qareenka ') haddii aad been macluumaadka ku qoran goobta aan la fara gelin ku sameeyeen xuquuqda aad.
Waxaan soo jeedinaynaa in aad marka hore la xiriir qareen taageero sharci oo ku saabsan arrintaan.
The xubno ka socda waa in lagu daraa in codsigaaga xadgudub copyright:
Bixi caddeyn qofka idman inay wax ka qabtaan oo ku hadlaya magaca milkiilaha xaq gaar ah oo la la sheegay in ay falayeen darteed.
Bixinta macluumaadka xiriirka ku filan si aynu waxaad la xiriiri.
Sidoo kale waa inaad ka mid ah cinwaanka email sax ah.
Waa in aad aqoonsado si faahfaahsan ku filan shaqada koobigeyda ayaa sheegay in la jebin oo ay ka mid yihiin ugu yaraan hal xilli search kaas oo wax ka muuqataa in sactivator.com natiijooyinka raadinta.
War qoraal ah oo ah in xisbiga ka cabanaya leedahay rumaysad aaminsan wanaagsan in la isticmaalo mid ah waxyaabaha la hab lagu dacwoonayaa aanu oggolaan milkiilaha copyright ah, ay wakiilka, ama sharciga.
War qoraal ah oo in macluumaadka ku jira wargelinta waa sax, iyo hoos ciqaabta been abuurka, in xisbiga ka cabanaya waxa la oggol yahay inay wax ka qabtaan oo ku hadlaya magaca milkiilaha xaq gaar ah oo la la sheegay in ay falayeen darteed.
Waa in la saxiixay by qofka idman inay wax ka qabtaan oo ku hadlaya magaca milkiilaha xaq gaar ah oo la la sheegay in lagu falayeen.
U dir ogeysiiska jebinta!
ling cabashadaada si xisbiyada kale sida our Provider Service Internet ma dedejiso doonaa codsigaaga oo keeni karta in jawaab dhac sabab cabashada aan si fiican loo soo gudbiyay.
Noqo Sure DMCA Ka hor
Raadi Dildilaaca Latest
Ku qor cinwaanka emailkaaga si aad noogu subscribe.